MKV Ndepụta Okwu extractor - Olee ka Wepụ Ndepụta Okwu si MKV
MKV bụ a multimedia akpa format na pụrụ ịgụnye video, audio, ndepụta okwu na ndị ọzọ na metadata. Ọ bụrụ na gị MKV videos ama nwere sobtaitel track, ị nwere ike mgbe niile ịgbanwee ya na / anya na dakọtara mgbasa ozi ọkpụkpọ KMPlayer ma ọ bụ VLC Media Player. Olee otú wepụ ndepụta okwu si MKV? I nwere ike ịgbalị 2nd na-atụ aro usoro nke isiokwu. Rịba ama na mgbe ụfọdụ, ndị ndepụta okwu na-ọkụ na MKV video. Ọ na-adịghị kpuchie na peeji a.
Tupu adịrị MKV sobtaitel, mgbe ụfọdụ, nwere ike ị chọrọ iji tọghata MKV ka AVI ma ọ bụ ndị ọzọ formats na sobtaitel. Ị nwere ike iji 1st na-atụ aro usoro iji mezuo nke a. Nke a ngwa-ahapụ gị tinye sobtaitel ka MKV ma ọ bụ ihe ọ bụla chọrọ usoro.
Nkwanye 1: Wondershare Video Converter Ultimate - Tinye Ndepụta Okwu ka MKV na tọghata ọ bụla Chọrọ Format
Nkwanye 2: MKVExtractGUI-2 - Wepụ Ndepụta Okwu si MKV
# Nkwanye 1: Best MKV Ndepụta Okwu Ntụgharị
Tọghata faịlụ dị ka MKV, AVI, MP4 na MOV ọ bụla ọzọ formats na sobtaitel.
Tinye ndepụta okwu gị MKV fim enweghị ihe ọ bụla hassle.
Tinye metadata ka fim, TV na-egosi na ebe obibi videos.
Ntak emi Họrọ Video Converter Ultimate
Tọghata ọ bụla faịlụ na Ndepụta Okwu
Nke a ngwa-akwado iche iche video formats. Dị nnọọ mbubata gị faịlụ ka a Ntụgharị na tọghata ya ndị ọzọ formats-enweghị àgwà ọnwụ.
Tinye Ndepụta Okwu
Ị nwere ike mfe tinye ebudatara sobtaitel gị video. Site na-agbakwụnye sobtaitel, ọ ga-abụ nnọọ mfe n'ihi na ị na-ekiri mba ọzọ na fim.
Hazie gị sobtaitel
Nke a ngwa-ahapụ gị zuru okè na sobtaitel. Ị nwere ike hazie ndị dị sobtaitel, ka ihe atụ, font, agba, size, ọnọdụ, nghọta, ma wdg
Dị iche iche ndepụta okwu na-akwado
Ọkọdọ a video enweghị sobtaitel? Nke a ngwa-ahapụ gị itinye sobtaitel na usoro nke SRT, ịnyịnya ibu, SSA.
Mụta ihe banyere Video Converter Ultimate >>
Olee otú Tinye Ndepụta Okwu ka MKV na tọghata ọ bụla Chọrọ Format
Maka agbakwunye sobtaitel gị MKV faịlụ (ndị ọzọ faịlụ-dịnụ), dị nnọọ inwe ya ebe a, Olee otú iji Tinye Ndepụta Okwu ka MKV Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere).
Ị ga-ama ka esi tinye gị ebudatara sobtaitel gị MKV faịlụ na 1st akụkụ nke na isiokwu. Na 2nd akụkụ, ọ na-agwa gị otú ị dezie ma tinye gị onwe gị sobtaitel ka MKV. Ọzọkwa ị ga-enweta ụfọdụ ihe ọmụma banyere sobtaitel na 3rd akụkụ.
Atụmatụ: Olee otú Download ndepụta okwu maka DVD Movies-egosi na TV
# Nkwanye 2: MKVExtractGUI-2
MKVExtractGUI-2 nwere ike ji dị ka onye MKV sobtaitel extractor wepụ sobtaitel si MKV ka ịnyịnya ibu, SRT ma ọ bụ sub faịlụ. Ọ na-achọ mkvtoolnix. E wezụga adịrị sobtaitel, ị nwere ike wepụ MKV iyi, gbawara n'etiti video na ọdịyo na iche iche faịlụ site na MKV faịlụ. Ugbu a na-eje ije site na mfe nzọụkwụ wepụ ndepụta okwu si MKV vidiyo na free MKV ndepụta okwu extractor.
1. Wụnye na-agba ọsọ MKV Ndepụta Okwu extractor
Ma MKVExtractGUI-2 na mkvtoolnix bụ freeware. Download ya karị gị na kọmputa. Akpa wụnye mkvtoolnix wee tinye MKVExtractGUI-2.exe ka mkvtoolnix nchekwa. Ị nwere ike akpatre okpukpu abụọ pịa MKVExtractGUI-2 na-agba ọsọ ya.
2. Họrọ MKV Ndepụta Okwu Track
Pịa "..." bọtịnụ emeghe gị MKV video na sobtaitel. Ị ga-ahụ ihe dị ka n'elu, na ọtụtụ tracks nke video, ọdịyo na ndepụta okwu. Họrọ sobtaitel ị chọrọ wepụ si MKV video.
3. wepụ Ndepụta Okwu si MKV ka ịnyịnya ibu, SRT, sub, wdg
Ke akpatre, pịa "Wepụ" button ịzọpụta sobtaitel si MKV gị na kọmputa. The sobtaitel ga-amịpụtara ka ịnyịnya ibu, SRT ma ọ bụ sub faịlụ Ọkpụkpọ, dabere na mbụ usoro nke sobtaitel na MKV faịlụ.
10 Video Players na ike Embed na Play ndepụta okwu
Olee otú Download Hulu ndepụta okwu
Download ndepụta okwu maka DVD Movies-egosi na TV
12 Nzọụkwụ na Mma Video edezi
Olee otú m tọghata An M2T Video Njikwa?
Olee otú Download Music si simfy
Olee otú Play QuickTime MOV Files na TV (Samsung TV gụnyere)
Olee otú Download Music si Mixcloud
Olee otú iji tọghata gụgharia Audio ka MP3
> Resource> Video> MKV Ndepụta Okwu extractor - Olee ka Wepụ Ndepụta Okwu si MKV